. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: April 2010
နာရီတွေ တိုက်စားတယ် ...။
အဲ .. ပြောင်းတော့ ပြောင်းလဲ လိမ့်မယ် ...။
သတိရခြင်းတွေလည်း ရှိလိမ့်မယ် ...။
အခေါ်အဝေါ် သတ်မှတ်ချက်လေးတွေ ပါမယ်
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ချိန်တွေ ပါမယ် ...။
ပိတောက်လေးတော့လည်း ချစ်ပါတယ် ...။
ပိတောက်တွေ ကတဲ့ပွဲ ...။
ရေးသားသူ မိုးခါး at 4/10/2010 06:55:00 AM 26 comments:
ရေးသားသူ မိုးခါး at 4/03/2010 12:59:00 AM 23 comments:
ရေးသားသူ မိုးခါး at 4/01/2010 12:08:00 AM 21 comments: